घरमा सन्तान लाभको खुशी संगै बिदेशमा सुतेका उनी सधैका लागी निदाए ! – ebaglung.com
घरमा सन्तान लाभको खुशी संगै बिदेशमा सुतेका उनी सधैका लागी निदाए !
२०७५ असार ३, आईतवार १०:१२	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ आसार ३ । उनी बैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत पुगेको अहिले तीन महिना भयो । घरमा श्रीमती सुत्केरी हुने आज हो कि भोलि हो भन्ने अबस्था थियो । तेसैले पनि ऊनी श्रीमती हलुङिग भएर जाने सोचमा थिए । तर उड्ने तिथि मिति आयो । श्रीमती हलुंगी नहुँदै उनी दोधारमै बोदेश उडेका थिए । उहाँ पुगे पछि सान्तान लाभको सुखद खबर आयो । यस अघि चार बर्शिय छोरा पछि उनीहरुको चाहना छोरी थियो । जुन जन्मिएको खुशीले गदगद थिए उनिहरु । घरबाट पठाइएका तिनै छोरीका तस्वीर हेर्दै सुति रहेका उनी सधैका लागी निदाए । यो चार दिन अघिको कुरा हो ।
उनी हुन गुल्मीको मालिका गाउँपालिका(८, मरभुङ्ग द्वाघासका २८ बर्षीय दान बहादुर पौडेल । तेस अघि प्रदेश गएका उनी फेरि नजाने बिचारमा थिए । तेसैले उनी स्थानिय तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरिमा भर्ती भएका थिए ।
श्रीमानको मृत्युको खबरले उनकी २५ वर्षिय श्रीमती दिपा सुत्केरी पोषणको बेला, बेला बेलामा मुर्छित हुनु परेको छ । नवजात शिशुको अबस्था र उनको अबस्था हेर्दा जो कोहिको मुटु भक्कानिन्छ । नियतिको ठुलो बज्रपात भन्छन वडाध्यक्ष टिका बहादुर जिसी । परिवारमा सन्नाटा छाएको छ
बागलुङ नगरपालिका भित्र सरुवा रोग : दश महिनाको अन्तरालमा तीनजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत !
नसर्ने रोगहरु सम्बन्धी एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न